Akhri: Meydka taliyihii booliska Soomaaliya oo lagu eliyey Muqdisho iyo sababta geerida oo la ogaaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri: Meydka taliyihii booliska Soomaaliya oo lagu eliyey Muqdisho iyo sababta geerida oo la ogaaday
Mareeg.com: Meydka taliyihii ciidanka booliska Soomaaliyeed, Marxuum Sareeyo Guuto Maxamed Ismaaciil Xasan oo khamsiiti si kedis ah ugu geeriyooday Muqdisho, shalayna loo qaaday magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa saaka dib loogu duuliyay magaalada Muqdisho, ka dib markii baaritaano lagu xaqiijiyey sababaha keenay geeridiisa loogu sameeyay magaalada Nairobi.
Meydka taliyaha ayaa waxaa lagu baaray isbitaalka Nairobi Hospital, iydoo la xaqiijiyay in aan laga helin wax calaamado ah oo muujinayo in la dilay.
Dhaqaatiirka baaritaanka ku sameeyay meydka taliyihii booliska Soomaaliyeed ayaa xaqiijiyay in uu u dhintay xanuunka dhanka sambabaha ah oo aysan jirin wax calamaado ah oo muujinayo in la sumeeyay,waxana tani ay meesha ka saareysaa shakigii ahaa in la dilay.
Meydka taliyihii booliska Soomaaliyeed ayaa waxaa garoonka Wilson ee magaalada Nairobi ku sii sagootiyay safiirka dowlada Soomaaliya u fadhiyo dalka Kenya Ambasdor Maxamed Cali Nuur Ameriko, qunsulka safaarada Soomaaliyeed ee dalka Siyaad Maxamuud Shire iyo xoghayaasha Safaarada Soomaaliyeed ee Dalka Kenya.
Geerida talyihii ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa loo xiray ilaa 4 qof oo labo ka mid ah ahaayeen dhaqaatiirtii daweynayey, iyadoo laga shakiyey in la sumeeyey ama la siiyey dawo khalad ah, waxaana la filayaa in maanta lagu aaso magaalada Muqdisho.
← Dadweynaha Burkina Faso oo diidan xukunka milateriga & debadbaxyo lagu dhawaaqay → Safiirka Shiinaha oo $20 Kun dollar ku biiriyey gurmadka abaaraha Soomaaliya